Manazava ny zava-drehetra tokony hanakana ny botsaka sy ny mpikaroka tranokala
Azo antoka ny filazana fa maro ny fomba fijery izay tonga ao amin'ny tranonkalanao dia avy amin'ny loharano tsy miangatra sy tsy misy loharano, ary tsy tsara izany satria tsy maintsy miala izany ianao raha te hahita ny tranokalanao hitombo ho an'ny androm-piainana. Raha mahatsapa ianao fa tsara sy azo itokisana ny varotra bot, dia manao fahadisoana lehibe ianao satria mety hitarika Google hanaisotra ny kaontinao AdSense. Amin'ny ankapobeny, ny botso dia hita amin'ny fitohanan'ny olona ao amin'ny Google Analytics, saingy tsy izany no volana maromaro lasa izay. Amin'izao andro izao, maherin'ny 70 isan-jaton'ny fifamoivoontenan'ny vohikala kely dia avy amin'ny bots and sources sous. Max Bell, ilay manam-pahaizana Semalt , dia mampitandrina anao fa ny andian-jatovo dia miezaka hatrany miditra amin'ny tranokalanao amin'ny fomba maro, ary mety tsy ho azonao esorina izany - arçelik servis zeytinburnu.
Botsa marobe izay mitsidika ny tranokalanao dia tsy inona fa fo sy tsy misy ilana azy; Na dia izy ireo aza dia mahasoa ho an'ny tranonkalanao raha toa ka tonga amin'ny vola kely. Ny sasany amin'ireo bota tsara, ohatra, dia ampiasain'ny Google mba hahitanao votoaty vaovao ety anaty aterineto. Saika ny ankamaroan'ny motera fikarohana s mampiasa tsara bots mba hamantarana ny kalitaon'ny lahatsoratra. Ny fomba fijeriny ny kalitao dia niova, ankehitriny izy ireo dia manolo ny fampiasana ireo serivisy rindrambaiko mavesatra..Manaraka ny rohy ireo swarms, mitsambikina avy amina toerana iray mankany amin'ny iray hafa, ary manindry ny votoatiny vaovao sy novaina. Google complicated bots, miaraka amin'ny fitsipika lalina izay afaka mifehy ny fitondran-tenany. Ohatra, ny baiko NoFollow amin'ny rohy dia mahatonga azy ireny ho tsy mahomby ary tsy hita maso amin'ny Google bots.
Bad bots ireo no manimba ny tranokalanao ary tsy afaka manome tombontsoa. Tadiavina fohifohy izy ireo ary mikaroka azy amin'ny endriny. Ny votoatinao dia aseho amin'ny olona sy ny bots, tsy miraharaha ny kalitao sy ny maha-izy azy. Ireo boka ratsy dia tsy miraharaha ireo toro-làlana momba ny robot ary tsy mampiasa blôgy IP mba hitazonana ny kalitaon'ny pejy Internet anao. Ny iray amin'ireo olana goavana indrindra amin'ireo bots ireo dia ny hoe sarotra ny manindry ny votoaty ary mijanona tsy miafina amin'ny vahoaka izy raha mbola misokatra ho an'ireo hackers izay mety miditra amin'ny rakitrao mba hahazoana ny rafitra misy anao. Misy spam bots ihany koa izay mety hanimba ny fampisehoana ankapobeny ny tranonkala. Mameno ny tranokalanao miaraka amin'ny hafatra efa voafaritra izy ireo, mahatonga ny mpividy mpitrandraka tsikelikely ho ratsy.
Tokony hanakana botsa ve ianao?
Raha maharay fomba fijery tsara avy amin'ny bota tsara ianao, dia mety tsy ilaina izy ireo mba hisakanana. Saingy raha mahazo fahitana avy amin'ireo boka ratsy ianao, dia mety hihevitra ny hanakanana azy ireo. Tokony hanakana ny Googlebot ianao, izay eo mba hanesorana ny tranokalanao amin'ny valin'ny fikarohana. Etsy andaniny, tokony hanakana ny spambots ianao. Raha mahatsiaro ny fiarovana ny vohikalanao amin'ny DDOSing ianao, dia ilaina ny manakana ny adiresy IP amin'ny bots ary ny spammers. Tadidio foana fa tsy hiraharaha ireo rakitra robot.txt ireo boka ratsy ireo, izay tena mampalahelo satria ny fiarovana io rakitra io dia tsy maintsy atao amin'ny fitomboan'ny tranonkalanao sy ny fahombiazany amin'ny ankapobeny.